Zapiet: Fududee Alaab Gaarsiinta iyo Qaadista Soo Qaadista oo la Dukaan iibso | Martech Zone
Iyadoo wadamada ay ka go'doonayaan faafitaanka COVID-19, shirkaduhu waxay la halgamayaan inay shaqaalahoodu sii shaqeeyaan, albaabadooduna furnaadaan, oo ay la soo baxaan nolol maalmeedkooda. Labadii bilood ee la soo dhaafay, waxaan caawinayay a beeraha maxalliga ah oo ka sameeya gaarsiinta hilibka Indianapolis iyaga oo leh Soo iibso rakibaadda. Waxay haysteen dhowr iibiyeyaal ah oo nidaamka soo ururiyey ka hor imaatinkeyga markabka waxaanan ka shaqeynayey sidii loo adkeyn lahaa is-dhexgalka iyo is-hagaajinta markii masiibadu ku dhacday.
Beerku hadda wuxuu shaqeeyaa habeen iyo maalin si uu ula jaanqaado baahida, waxaana ku taageeray macaamiisha dhamaadka iyo sidoo kale shaqaalaha. Ma aysan haysan cid farsamo ah oo caawisa waxaana jiray is dhexgal badan oo gacanta ah. Si kastaba ha noqotee, hal muuqaal oo ka mid ah rakibaadda Shopify waxay ahayd codsi ay dhisteen Zapiet ee Bakhaarka Bakhaarka iyo Gaarsiinta.
Qaadista Bakhaarka Zapiet + Gaarsiinta
Barnaamijkooda, waxaan awood u yeeshay inaan abuuro waxyaabo kala duwan aagagga boostada ku saleysan kuwaas oo dejiyey waqtiyada diyaarinta iyo maalmaha dhalmada. Waxaan sidoo kale awoodnay inaan ku darno goobaha bakhaarka ee macaamiisha si toos ah uga qaataan amarada. Waqtiyada diyaar garowga waxay shaqaalaha u suurta gelinayaan inay helaan waqti ay ku soo uruuriyaan amarada, ku rartaan, kuna gaarsiiyaan ama ay u soo qaadaan. Xaaladda macmiilkan, waxay ku lahaayeen xooggooda geynta. Barnaamijku wuxuu la midoobayaa adeegyo kale oo gaarsiin ah, sidoo kale.
Isdhexgalka gawaarida Shopify waa mid aan kala go 'lahayn, taas oo u oggolaanaysa macaamilka inuu doorto gaarsiinta ama soo qaadista. Hadday gaarsiin tahay, koodhadhka boostada ama siibadaha ayaa loo ansaxiyay inay yihiin goob la geeyay isla markaana taariikh xulo la siiyay si loo xusho taariikhda bixinta habboon. Hadday tahay dukaan qaadis, waxaad ka heli kartaa dukaanka kuugu dhow. Haddii aad leedahay hal meel oo keliya, waxaad dooranaysaa goorta aad jeceshahay inaad soo qaadatid amarka. Waa tan waxa ay u egtahay barta macmiilkayga:
Xasuusta dhinaca: Haddii aad ku sugan tahay bartamaha Indiana oo aad jeclaan laheyd inaad isku daydo bixinta guriga Tyner Pond Farm, halkan waa a 10% qiimo dhimis ah amarkaaga koowaad!
Zapiet's Shopify App waa mid aad u guuleysatay oo kooxdooda taageera ay sheegeen inay ku darsadeen in ka badan kun kun oo dukaanno intii lagu jiray xiisaddan. Kooxda halkaas joogta waxay shaqeysaa habeen iyo maalin si ay u caawiyaan macaamiishaas dusha sare ku jira iyo qaabeynta barnaamijkooda.
Barnaamijku si aad ah ayuu u jilicsan yahay. Markii aan u baahanahay inaan xirno soo qaadka dukaanka, waxay u sahlaneyd sidii loogu dami lahaa barnaamijka oo marwalba waan dib u awoodsiin karnaa markii dhibaatadu dhammaato. Waxaan sidoo kale karnay bar fariin fiican oo la socda barnaamijka, taasoo u oggolaanaysa martida cusub inay eegaan si ay u eegaan haddii aan gaarsiinno nambarkooda.
Noocyada Bakhaarka Bakhaarka + Gaarsiinta oo ay ku jiraan:
Helitaanka alaabta - Calaamadee badeecadaha shaqsiyeed sida kaliya loogu heli karo qaadista, dirista ama rarka.
Soo iibso isdhexgalka POS - Arag, maamul oo abaabul dalabyadaada soo qaadista iyo keenista ah dukaan gudihiisa.
Tirakoob badan - Iswaafaji oo tus macaamiisha helitaanka tooska ah ee goob kasta.
Amarka maaraynta - Eeg jadwalka amarada u baahan u diyaargarowga maalin kasta ama meel laga baxo.
Ka hortagga khiyaanada - Amaradaada ka dhig kuwo ka badbaado khayaanada adoo fulinaya muuqaalka Nidaamka Amniga ee barnaamijka.
Meelaha aan xadidanayn - Si fudud u soo dhoofso dhammaan goobahaaga oo aad u maamusho si shaqsi ah.
Is-beddelka ballaaran - Qeex helitaanka, meelaha laga baxo, waxyaalaha la iska soo iibsado, otomatiga, sharciyada, iyo waxyaabo kale oo badan.
Taariikhda iyo waqtiga xulista - Deji goobta iyo helitaanka wax soo saarka illaa 5-daqiiqo oo u oggolow macaamiisha inay doortaan.
Si buuxda u waafaqsan - Ku dhex dar Deliv, Quiqup, Diritaanka Dareenka leh, Dhoofinta Bespoke, Xeerarka Maraakiibta Sare iyo inbadan. Arag dhammaan Isku-darka Zapiet.
Taageero amar qabyo ah - Amarada qabyada ah ee jira u rogo qaadis ama amar bixin.
Xadka booska gaarsiinta - Ka fogow xad-dhaafyada adoo xaddidaya tirada alaabooyinka la keenayo waqti kasta oo aad u baahan tahay.
Ansixinta geodistance - Si otomaatig ah u soo bandhig qiimaha iyo adeegga saxda ah ee ku saleysan meesha macaamiisha ku yaalliin.
Iyo, haddii aad rabto inaad habeyso sicirkaaga bixinta, Zapiet sidoo kale waxay leedahay barnaamij loogu talagalay Heerarka Gaarsiinta Fogaanta or Heerarka Gaarsiinta ee Zip Code. Zapiet waxay bixisaa tijaabo bilaash ah oo 14 maalmood ah, markaa waad hubin kartaa barnaamijka inuu ku habboon yahay socodkaaga oo uu sameeyo waxaad u baahan tahay. Ka noqo waqtigaas isla markaana lacag lagaa qaadi maayo.
Ku rakib Goobta Bakhaarka Zapiet + Gaarsiinta
Tags: gaarsiinta barnaamijkageynta ecommerce gurigaqaadista dukaanka ecommercedukaankaSoo iibso dukaan qaadistaBeerta Tyner Pond